Posted by ရွက်မွန် at 8:19 AM
Very good point, Ko Zaw Min.
ကိုဇော်မင်း ဦးသွားတယ်.. ကျမလည်း Face Book မှာပြောဖြစ်သေးတယ်..။ နောက်ကို အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်ဖို့အတွက် ဗြောင်ပဲ နာမည်တွေသုံးတော့မယ်လို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ ကိုယ့်စကားကို တာဝန်ယူတာ တမျိုးပါပဲ..။ ဒီ post ကို ကျမ Blog မှာ Share ဖို့ ယူသွားပါတယ်။
ZAYAR YUN said...
GOOD TAE BYAR.D LO MA LAE TI KYA MAR
Hi, Thanks for your post! Please share more information about those guys.
86 IR first batch isadistinct group like as Ko Ko Gyi, Dr.Kyaw Yin, Dr.Nyunt Hlaing, Dr. Kyi May Kaung, etc.
Ko Kyaw Yin's god mother is Daw Ni Ni Myint (history commission).
ကိုဇော်မင်း ဆောင်းပါးက အချက်အလက်တချို့ကို ဒေါ်စုမွေးနေ့မှာ DPNS-UK ကိုယ်စား ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော်မင်းကို ခွင့်တောင်းဖို့ အချိန်မရလို့ အခုမှ တောင်းလိုက်ပါတယ်။
AKM (DPNS UK)